Wishpond: Kugadzira Mafungu muRutungamiri Generation uye Automation | Martech Zone
Wishpond: Kugadzira Mafungu muRutungamiri Generation uye Automation
Chitatu, December 16, 2015 Chitatu, Kukadzi 9, 2022 Douglas Karr
Kune dutu riri padhuze muindasitiri yekushandisa otomatiki. Zvipingamupinyi zvekupinda kwemapuratifomu matsva ari kudzikira uye kudzika, mapuratifomu akakura ari kumedzwa neepuratifomu yekushambadzira, uye avo vakasara pakati vari mune mamwe makungwa ane hukasha. Chero ivo vanonamata vanogona kuvimba nevavanotenga-base kuti vataridzike zvinokwezva kumutengi, kana ivo vanofanirwa kudonhedza mitengo yavo - yakawanda.
Mumwe anovhiringidza muindasitiri yatinoda ndizvo Wishpond. Sei? Zvakanaka, zvakadii nezve isu kuvhura iyo yemahara kushandisa kumabhizinesi madiki ane isingasviki mazana maviri ekutaurirana mudura ravo. Uye zvemahara, hatisi kutaura mashandiro mashandiro - inouya nematurusi ekupinza, kushambadzira email, mapeji ekumhara, kushambadzira otomatiki, webhusaiti popups, mafomu, uye manejimendi anotungamira.
Leads inochengetwa uye hunhu hwese hunoteedzerwa.
Uye zviito zvinotsanangurwa zviri nyore mune zvine musoro mushandisi interface:
Saka chaizvo - zvakaderera pane mutengo weiyo huru email chikuva, iwe unokwanisa kuwana kwakazara kushambadzira sisitimu. Pano ars mamwe eakakosha maturusi anowanikwa:
Mapeji ekutumira - Vaka, shambadza & A / B kupatsanura bvunzo nhare-inoteerera Inotarisa Mapeji mumaminetsi.
Webhusaiti Popups - Chinja vamwe vashanyi vewebhusaiti kuti vatungamire nemafomu popup ewebhusaiti.
Forms - Embed Lead-Generation Mafomu pane webhusaiti yako uye blog.
Makwikwi & Kukwidziridzwa - Mhanya Facebook Sweepstakes, Makwikwi Emifananidzo, Instagram Hashtag Makwikwi uye zvimwe.
Marketing Automation - Trigger yakasarudzika maemail kune ako maRoads zvinoenderana nezvavanenge vachiita uye pachavo ruzivo.
Email Marketing - Sarudza maemail ako kune wega Lead zvichibva pane chero chiitiko kana ruzivo rwevanhu.
Kutungamira Management - Gadzira Rondedzero zvichibva pane zvako zvinotungamira zviitiko pane yako saiti & mishandirapamwe.
Tungamira kurovera pasi - Rora zvibodzwa zvako zvichibva pane zvavakaita uye ruzivo rwevanhu kuti uone kuti ndeipi yakagadzirira kutenga.
Tungamira Maprofiles - Wana nzwisiso muMutungamiri wako. Wona yavo webhusaiti chiitiko, maemail avakavhura & nezvimwe.
Kana iwe uri agency, Wishpond zvakare ine chirongwa che agency.
Tisingataure, ivo zvakare vakagadzira masanganiswa neSalesforce, Infusionsoft, Insightly, Batchbook, Highrise, Pipedrive, Contactually, Base CRM, SalesforceIQ, OnePage CRM, Close.io, uye Clio. E-mail kushambadzira kubatanidzwa kunosanganisira Mailchimp, AWeber, GetResponse, Constant Contact, Benchmark, Campaign Monitor, VerticalResponse, Eventbrite, Mad Mimi, ActiveCampaign, uye Emma. Ivo zvakare vane yekubatsira tafura yemapurogiramu kubatanidzwa neUsvovoice, kuongororwa kwekubatanidzwa neSurveyMonkey, uye webinar kubatanidzwa kwepurogiramu neClickWebinar, uye GoToWebinar. Pasina kutaura nezveSlack kusangana.
Uye Wishpond yakangosheedzera yayo Twilio kusangana kwefoni neSMS.
Kana iwe uri mushandisi weWordPress, ivo vane plugins eMapeji Ekumhara, Webhusaiti Popups, Mafomu eWebhusaiti, uye Makwikwi Evanhu!
Saina kumusoro kune YEMAHARA Wishpond Akaunti
Kuzivisa: Isu tiri vanobatana mudiwa neWishpond uye tiri kushandisa yedu yakabatana chinongedzo mune ino posvo.
Tags: ActiveCampaignAWeberBase CRMBhukuChiratidzoCampaign MonitorDzvanyaWebinarclioVhara.ioConstant ContactkuonanaEmmachaitikaGetResponseaiwembeHighriseInfusionsoftInsightlypamapejiMad MimimailchimpOnePage CRMPipedrivesalesforceSalesforceIQusimbeMakwikwi EvanhuSurveyMonkeyTwilioUserVoicevertical kupinduraMawebhusaiti MafomuWebhusaiti Popupswishpond
Nzira ina dzeKuratidzira Management Strategic - kana Kushaikwa - iri Kutambisa Nguva, Zviwanikwa uye Bhizinesi
Dec 29, 2015 pa 11: 11 AM
Ndinofara kuti zviri nyore kubatanidza wishpond neGetResponse 🙂
Jan 4, 2016 na6:50 PM
Chinyorwa chakanaka, ndatenda Douglas! Ndedzipi pfungwa dzako pamusoro peWishpond's Landing Peji muvaki? Zviri nyore kushandisa here?
Jan 7, 2016 pa 1: 15 AM
Iko kusarudzwa kweanomhara peji matemplate akanaka. Kugadzirisa kunogona kuda rimwe basa, zvakadaro!
Kukadzi 3, 2016 na6:36 PM
Zvinoshamisa! Ndatenda nekugovera chinyorwa ichi Douglass!